‘पुर्ख्यौली विरासत’ पछ्याउँदै प्रेम गाहामगरः जसको विद्रोहले ब्रिटिश आर्मीमा भयो उथलपुथल « Asia Sanchar : Nepal News Live
‘पुर्ख्यौली विरासत’ पछ्याउँदै प्रेम गाहामगरः जसको विद्रोहले ब्रिटिश आर्मीमा भयो उथलपुथल
काठमाडौं, २७ वैशाख – आफैमा चुनौतिपूर्ण काम हो, विद्रोह। उत्तिकै जोखिमयुक्त पनि। जहाँ विभेद हुन्छ, त्यहाँ विद्रोह हुन्छ। विद्रोहको मुख्य कारण नै विभेद हो। संस्था, समाज वा देश, विभेदकै कारण विद्रोह भएको थुप्रै उदाहरण छन्।
विभेद विरुद्ध हुने अधिकांश विद्रोह सफल पनि भएका छन्। सैन्य संगठनमा पनि विद्रोह! त्यो पनि बेलायती सेनामा!
हो, बेलायती सेनामा गरिएको विभेद विरुद्ध विद्रोह गर्ने एउटा हिम्मतिला गोर्खाली सिपाही हुन् प्रेम गाहा मगर। खासमा त्यो विद्रोह नभएर समानताका लागि लडिएको ‘कानुनी लडाइँ’ थियो।
आफूमाथि विभेद भएको छ भन्ने थाहा नै नपाउनु भिन्नै कुरा हो। तर, थाहा पाउँदा पाउँदै सहेर बस्नु आफूमाथि आफैले गरेको अन्याय पनि हो । प्रेमले जब आफूमाथि विभेद भएको थाहा पाए, ब्रिटिश सेनामा नै हलचल हुने गरी प्रतिवाद गरे । अनि उनको प्रतिवाद (विद्रोह) सफल पनि भयो।
विद्रोहलाई कतिपयले नकारात्मक रुपमा पनि व्याख्या गर्ने गर्दछन्। तर, विभेद विरुद्धको विद्रोह कदापि नराम्रो कुरा होइन। जब बेलायती सेनामा प्रेमले भोग्दै आएको विभेद हट्यो, विद्रोह सकारात्मक थियो र आवश्यक पनि थियो भन्ने एकैसाथ प्रमाणित भयो।
खेलाडीहरु खेलको नियम पालना भयो वा भएन भन्ने मात्रै जान्दछन्। खेलमा जब नियमको पालना हुँदैन, त्यो खेल नभएर अराजकता मात्रै हुन्छ। नेपालको राष्ट्रिय बक्सिङ खेलाडी रहिसकेका प्रेम ‘नियमहरू’प्रति पहिलेदेखि नै सचेत थिए।
बक्सिङका राष्ट्रिय खेलाडी
२०३२ सालमा गुल्मीको तम्घासमा जन्मेका प्रेमलाई उनका बुवा आमाले धेरै पढोस् भन्ने चाहन्थे। तम्घासकै महेन्द्र माविबाट एसएलसी उत्तीर्ण गरेका प्रेमलाई त्यसपछि भने पढाइले तानेन। उनको ध्यान खेलकुदले तान्यो। त्यसमा पनि बक्सिङले।
नेपालकै पहिलो ओलम्पियन बक्सिङ खेलाडी दलबहादुर राना प्रेमकै मामाका छोरा हुन्। ‘दलबहादुर दाई’ ले राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिस्पर्धामा सहभागी भएर पुरस्कार तथा मेडल ल्याउँदा प्रेमको मन लोभिन्थ्यो।
प्रेमलाई पनि दलबहादुरकै कर्मले लोभ्यायो। खेलाडी भएर पनि देशको नाम प्रख्यात बनाउन सकिने रहेछ भन्ने भावना उनको मनमा पलायो। अनि पछ्याए, दलबहादुरकै पदचाप। ‘बुवा आमा धेरै पढोस् भन्नुहुन्थ्यो, तर, मलाई दाइको सफलताले लोभ्याइरहेको थियो’ प्रेमले भने, ‘खेलाडी बनेर देशको नाम चम्काउँछु भन्ने विचार भित्रैबाट आयो।’
बलिष्ठ शरीर अनि बक्सिङ कौशल, प्रेम पनि राष्ट्रिय टिममा छानिए र राष्ट्रिय बक्सिङ टिममै रहेर तीन वर्ष बिताए। तर, बक्सिङले लामो समय अड्याउन सकेन। तीन वर्षपछि ‘पुर्ख्याैली विरासत’ पछ्याउँदै प्रेम लागे सैन्य सेवामा।
अनि शुरु भयो सैन्य यात्रा
सुन्दै अचम्म! एउटै परिवारका चार पुस्ता सेनामा। पुस्तैनी सेवा जस्तो! तम्घासको गाहा मगर परिवारमा उनीभन्दा अगावै तीन पुस्ताले सैन्य क्षेत्रमा नै सेवा गरिसकेका थिए।
जिजुबाजे पूर्णवीरले तत्कालिन इष्ट इण्डिया कम्पनीबाट पहिलो विश्व युद्ध लडे। हजुरबुवा तुलबहादुरले पनि इष्ट इण्डिया कम्पनीबाट नै ब्रिटिश सेनामार्फत दोश्रो विश्वयुद्ध लडे। बुवा लेखहादुर नेपाली सेनामा भर्ती भए।
आफूअघिका तीन पुस्ताले राइफल चलाइसकेकाले प्रेमलाई त्यही पेशामा शुरुमा आकर्षण थिएन। ‘तर अवस्था यस्तो आयो कि म पनि पुस्तैनी पेशा जस्तै ब्रिटिश सेनामा आइपुगेँ’ सन् १९९६ जनवरीमा बेलायती सेनामा प्रवेश गरेका प्रेमले त्यतिबेलाको कथा सुनाए।
किन त? ‘ब्रिटिश आर्मीमा पैसा पनि राम्रै हुने, सुविधा पनि पाइने’ उनलाई लोभ्याउने एउटै कारण यही थियो। ब्रिटिश आर्मीमा भर्ती भएपछि नौ महिना तालिममा बिताए। तालिम पूरा गरेपछि उनको पोस्टिङ भयो ‘रोयल गोर्खा राइफल’मा, जहाँ उनले तालिममा सिकेको सैन्य कला मात्रै नभई आफूभित्र लुकेको कला पनि देखाउने अवसर पाए।
‘ब्रिटिश आर्मीमा रहेर बेलायत र बेलायती महारानीको सेवा गर्नु त छँदै थियो, ब्रिटिश आर्मीको बक्सिङ टिममा रहेर खेल कौशल देखाउने अवसर पनि पाएँ,’ उनले सुनाए।
बेलायती सेनामा रहँदा उनले बोस्निया हर्जगोभिनिया, कोसोभो, ब्रुनाई, फकल्याण्ड, अमेरिका, बेलिज, जर्मनी, साइप्रस, क्यानाडा, केन्या लगायतका मुलुकमा रहेर पनि काम गरे।
फौजी काम त गर्नु नै थियो, त्यस अलावा उनले अर्को अवसर पनि पाए। त्यो हो– ब्रिटिश आर्मी बक्सिङ टिममा पर्नु।
सन् १९९६ डिसेम्बरदेखि १९९७ डिसेम्बरसम्म एक वर्ष उनले बेलायती सेनाको बक्सिङ टिममा रहेर बेलायती सेनाको नाम चम्काउने अवसर पाए। लण्डनबाहेक जर्मनी र साइप्रससम्म पुगेर उनले ब्रिटिश आर्मी बक्सिङ्ग टिमको तर्फबाट प्रतिस्पर्धा गरे र पुरष्कार तथा पदक पनि पाए।
बेलायतबाट प्रकाशित हुने ‘मिरर’ पत्रिकाले ‘बेस्ट अफ ब्रिटिश’ भनेर उनको टिमबारे समाचार नै छाप्यो। ब्रिटिश आर्मी बक्सिङ टिममा रहेर बक्सिङमा आफ्नो कौशल प्रदर्शन गर्दागर्दै उनलाई प्यारासुट तालिममा पठाइयो।
आदेश मान्नुपर्ने वाध्यता थियो, उनी गए । तर, तालिमका क्रममा उनी घाइते भए । जसले उनलाई शारीरिक रुपमा कमजोर बनायो। प्रेम जब शारीरिक रुपमा कमजोर भए, तब शुरु भयो फौज भित्रै उनीमाथिको विभेद।
फौजभित्रै संघर्ष र उपलब्धि
शारीरिक रुपमा कमजोर भएपछि पहिलेजस्तो प्रदर्शन सम्भव थिएन। त्यही बीचमा उनी ‘ब्रिटिश सिटिजन’ फिलिपिन्सकी एक महिला नर्ससँग विवाह बन्धनमा बाँधिए।
विवाह गरेपछि फौज भित्रैबाट पति पत्नीका लागि आवासीय सुविधा दिने गरिन्छ। तर, प्रेमले पाएनन्। अरु ब्रिटिश जोडीले ‘क्वार्टर’ पाउने। तर, आफूले नपाउने भएपछि उनले बेलायती कानुन र सैन्य कानून अध्ययन गर्न थाले। कानुनमा नपाउने भन्ने कहीँ थिएन। उनले माग गरिरहे, सुनुवाइ भएन।
‘भेदभाव यसरी झाँगियो कि कतै जागिर नै जाने त होइन भन्नेसम्मको अवस्था आयो,’ उनले भने, ‘तर म भेदभावविरुद्ध अदालत नै गएँ।’
आफै कार्यरत संस्था, त्यसमाथि फौजी निकाय, अदालत जानु सहज थिएन। अदालतले भने उनलाई न्याय दिलाइदियो।
अब फौज भित्रका थुप्रै नियम परिवर्तन हुन थाले। ब्रिटिश आर्मी का गोर्खा सिपाहीहरूले पनि क्वार्टर पाउन थाले। पहिले ‘म्यारिड क्वार्टर सुविधा’ सेवामा रहुन्जेल १५ वर्षमध्ये तीन वर्ष मात्रै पाउने व्यवस्था थियो। तर उनको अदालती लडाइँपछि आर्मीले त्यो विभेदकारी प्रावधान हटायो।
उनले लण्डनमै विवाह गरे पनि विवाह दर्ताका लागि काठमाडौंस्थित ब्रिटिश गोर्खाको कार्यालयमा आउनुपर्ने थियो। त्यतिबेलै नयाँ व्यवस्था बन्यो, ‘जुन युनिटमा कार्यरत हो, त्यही युनिटमा’ विवाह दर्ता गर्न सकिने।
उनकै संघर्षका कारण अर्को सफलता पनि हात लाग्यो, अवकासप्राप्त सैनिकहरूका लागि। ‘एमपीजीएस’ अन्तर्गत अवकाशप्राप्त सैनिकहरुलाई थप दुई वर्ष सुरक्षासम्बन्धी काममा सहभागी गराउने नीति पनि उनकै संघर्षको प्रतिफल थियो। एमपीजीएसको पहिलो गोर्खाली उनै थिए, जसले सेवारत अवस्थामा नै उक्त भूमिका पाए।
बेलायत युरोपमै सबैभन्दा बढी नेपाली रहेको मुलुक हो। बेलायतमा रहेका नेपालीहरू र नेपाली समाजसँग उनको सम्बन्ध निकै बाक्लिएको थियो। जब अवकाश पाए, त्यसपछि उनी पूर्ण रुपमा नेपाली समाजसँग हातेमालो गर्न थाले।
समाजले तान्यो एनआरएन अभियानमा
गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) स्थापना हुँदा उनी बेलायतमै थिए। स्थापनाकालदेखि हालसम्मका गतिविधिबारे उनी जानकार छन्। त्यतिबेला उनी फौजमा थिए।
‘सेनामा नै हुँदा पनि एनआरएन अभियानमा म सहभागी भइरहन्थे’ सन् २००६ मा तत्कालिन एनआरएन युके अध्यक्ष अशोक श्रेष्ठको कार्यकालमा एनआरएनका कार्यक्रमहरूमा सहभागी भएको उनले सम्झिए।
खासगरी युवा पुस्ताको वृत्ति विकास र युवा पुस्तालाई नेपाल चिनाउने अभियानमा उनको रुचि हुन्थ्यो र सहभागिता पनि। ‘बेलायतमा बस्ने युवा पुस्तालाई एक जुट बनाउने मेरो चाहना थियो,’ नेप्लिज युथ यूके’ का प्रमुख सल्लाहकारसमेत रहेका प्रेमले भने, ‘युवा पुस्ताहरुसँग काम गर्दै जाँदा एनआरएन अभियानमा सक्रिय हुन थालेँ।’
अवकासपछि बेल्हाम बक्सिङ क्लबमा कोचका रुपमा झण्डै चार वर्ष बिताएका प्रेमले त्यही बीचमा व्यवसायमा पनि हात हाले। शुरुमा वाटरलूमा र पछि अल्डरशटमा ‘टेम्पटेशन नाइट क्लब’ सन्चालन गरेर उनले व्यवसायसँगै समाजसेवालाई निरन्तरता दिन थाले।
‘साथीहरूले एनआरएनमा बसेर काम गर्नु पर्यो भन्नुभयो’ मैले पनि हुन्छ भनेँ, सन् २०१७–१९ मा उपाध्यक्षका रुपमा एनसीसी बेलायतमा प्रवेश गरेका प्रेमले सुनाए।
उपाध्यक्ष भएपछि उनलाई ‘च्यारिटी डिपार्टमेन्ट’ प्रमुखको जिम्मेवारी दिइएको थियो । समाजमा राम्रो सम्बन्ध र सम्पर्क भएका उनलाई उक्त जिम्मेवारी पूरा गर्न कुनै समस्या भएन।
उनी जे चाहन्थे, जिम्मेवारी पनि त्यस्तै पाए। ‘युवा पुस्तालाई एकजुट बनाउने, बेलायतमा रहेका नेपाली वृद्धवृद्धालाई सहयोग गर्ने र नेपाली कला संस्कृतिको संरक्षण र विस्तार गर्ने मेरो चाहना थियो, जिम्मेवारी पनि त्यस्तै पाएँ,’ उनले भने।
‘च्यारिटी डिनर विथ बक्सिङ, डिज्याबिलिटी एड इभिनिङ र दी भ्वाइस अफ नेपाल कन्सर्ट’ उनी संयोजक भएर गरिएका तीन मुख्य कार्यक्रम थिए, जुन अपेक्षाकृत सफल पनि भए। जोन राइडर, क्रिस ब्रोक लगायतका अन्तर्राष्ट्रिय बक्सरहरु एनआरएनको बक्सिङ्ग प्रतियोगितामा सहभागी भए।
सोही कार्यकालमा लण्डनमा २९ वर्षीय युवा लेख बहादुर राना मगरको निधन भयो। कमजोर आर्थिक परिवारका लेखको शवलाई नेपाल पठाउनुपर्ने थियो। सहयोग संकलनदेखि शव पठाउनेसम्मका सबै प्रक्रियाको नेतृत्व उनी आफैले लिए। काम गर्दै थिए, कार्यकाल सकियो।
सेप्टेम्बर २०१९ मा २०१९–२०२१ कार्यकालका लागि चुनाव भयो। ‘साथीहरुले फेरि उपाध्यक्ष हुनुपर्यो भन्नुभयो मैले नाई भनिनँ’ उनले सुनाए। दोश्रो पटक उपाध्यक्षमा चुनिए। यसपटक उनको जिम्मेवारी फेरियो। उनलाई ‘गोरखा डिपार्टमेन्ट’को संयोजक तोकियो।
गोरखा मुद्दा नेपाल-बेलायत सम्बन्धको सबैभन्दा जटिल र पेचिलो मुद्दा हो। पूर्व गोरखाहरुले थालेको समानताको लडाईं वर्षौंदेखि जारी छ। ‘म आफै पनि पूर्व गोरखा भएकाले यो भूमिका निर्वाह गर्न सक्छु भन्ने लाग्यो,’ जिम्मेवारी लिँदै गर्दाको अनुभव सुनाए।
विज्ञहरू र अग्रजहरूसँग सल्लाह गरे, योजना बनाए र सोही अनुरुप अगाडि बढे। पछिल्लो दुई वर्षमा पूर्व गोरखाहरूको मुद्दामा थुप्रै काम गरेका छन् उनले। अब देखिने परिणामको प्रतीक्षा गरिरहेका छन्।
बेलायतभर छरिएका पूर्व गोरखाहरूको सहयोगार्थ पहिलो पटक उनले बेलायत अन्तर्गतका सबै राज्य र नगरसम्म टिम नै बनाए। १८ सदस्यीय कार्यसमिति बनाएका उनले टिममा १२२ जनालाई समेटे, जसबाट सहयोग पुर्‍याउन सहज भयो।
‘मैले मेरो चुनावी घोषणापत्रमा नै भूतपूर्व गोरखा सैनिकसँग सम्बन्धित संस्थाहरुलाई एकजुट बनाएर उहांहरुको समस्या समाधानमा बलियो पहल गर्ने उल्लेख गरेको थिएँ,’ उनले भने, ‘त्यही अनुसार मध्यस्थकर्ताको काम थालेँ।’
अघिल्लो कार्यकालमा नै अर्थात २०१८ मार्चमा नै पूर्व गोरखाहरूको समस्या समाधानका लागि बेलायत र नेपाल दुवै सरकारलाई १३ बुँदे प्रतिवेदन बुझाइएको थियो। उक्त प्रतिवेदन कार्यान्वयनका लागि दुवै सरकारलाई वार्ता टोली गठन गरी अगाडि बढ्नुपर्ने आम पूर्व गोरखाहरूको माग छ। ‘त्यही प्रतिवेदन कार्यान्वयन गराउनेतर्फ नै म निरन्तर लागिरहेँ,’ उनले भने।
२७ मार्चमा उनकै संयोजनमा एक संवाद कार्यक्रम आयोजना गरियो, जहाँ पूर्व गोरखासँग सम्बन्धित प्रमुख ६ संस्थाका पदाधिकारीसहित झन्डै ३ सय जनाको सहभागिता थियो। ‘मुख्य अभियन्ता संस्थाहरूलाई एक ठाउँमा नल्याएसम्म यो अभियान सफल हुँदैन भन्ने मैले बुझेको थिएँ, त्यसैले बिजिडब्लुएस, गेसो, सत्याग्रह संयुक्त संघर्ष समिति, नागरिकता निरन्तरता अभियान, नेसा यूके र बिगेसोसहितका मुख्य संस्थाहरुसँग छलफल गरेँ,’ उनले आफ्नो जारी प्रयासबारे सुनाए।
सोही छलफलका आधारमा नै एनआरएन यूके गोर्खा विभागको अगुवाइमा बेलायतका प्रधानमन्त्री बोरिस जोन्सनलाई हुलाकमार्फत तथा नेपालका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई लण्डनस्थित नेपाली दूतावासमार्फत छुट्टाछुट्टै ज्ञापनपत्र बुझाइयो। ‘अब दुवै देशका सरकारले छिटोभन्दा छिटो वार्ता समिति बनाएर काम अगाडि बढाउनुपर्छ,’ उनले भने।
एकातिर कोरोना महामारी, अर्कोतिर कामको चाप। प्रेम रोकिएनन्। कोरोना कहरका बीचमा पनि उनी काममा दत्तचित्त भइरहे। बेलायतको नेपाली समाज र पूर्व गोरखाहरुको पक्षमा सक्रिय प्रेम गैरआवासीय नेपाली संघ, युके एनसीसीको आगामी निर्वाचनमा अध्यक्ष पदमा आकांक्षा राखेका छन्।
एनआरएनए युकेका उपाध्यक्षहरू रामचन्द्र पोखरेल, मोहन कार्की, नारायण कँडेल, एनआरएनए युकेका पूर्व उपाध्यक्ष शेर सुनार, इङ्ल्याण्ड राज्य परिषदका उपाध्यक्ष एलबीजेड गुरुङ लगायत बेलायतस्थित विभिन्न संघसंस्थाका अगुवाहरूको सुझाव, सल्लाह र परामर्शपछि आफूले अध्यक्ष पदका लागि उम्मेदवारी घोषणा गरेको उनले बताए। एनसीसी यूकेको नेतृत्व लिएपछि आफूले गर्ने कामको योजना पनि उनले तयार पारेका छन्।
यस्ता छन् अजेण्डा
बेलायतमा दुई लाखको हाराहारीमा नेपालीहरूको बसोबास रहेको छ। तीमध्ये झण्डै दुईतिहाइ त पूर्व गोरखा र तिनका परिवारका सदस्य छन्। पूर्व गोर्खाहरूको समस्या वर्षौदेखिको हो।
समस्या यत्तिमा सीमित छैनन्। समय क्रमसँगै थपिएका समस्याको सूचि पनि लामै छ। नेपाली नागरिकताको निरन्तरता, नेपालमा सम्पत्तिको अधिकार लगायतका विषय पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण छन्।
यिनै समस्या समाधान गर्ने तथा समाधान गर्न पहल गर्ने अजेण्डा प्रेमले तयार पारेका छन्। आफै पूर्व सैनिक रहेका प्रेमले भने, ‘भूतपूर्व गोर्खा सैनिकहरुको न्याय र समानताको पक्षमा १३ बुँदे मागसहितका ज्ञापनपत्र हामीले ब्रिटिश प्रधानमन्त्री तथा नेपाल सरकारलाई पठाइसकेका छौं। म आफै एक भूतपूर्व गोर्खा सैनिक भएकाले पनि आगामी कार्यकालमा गोर्खा समस्या समाधान गर्न म रातदिन क्रियाशील हुनेछु।’
उनले नेपाली नागरिकताको निरन्तरता र नेपालमा रहेको सम्पत्ति सुरक्षाको लागि गैर आवासीय नेपाली संघ अन्तर्रास्ट्रिय समन्वय परिषद मार्फत अभियान चलाउने पनि स्पष्ट पारे।
आर्थिक पारदर्शिता उनको अर्को मुख्य अजेण्डा रहेको छ। आफू अध्यक्ष भएमा पुरानो हिसाब राफसाफ गरेर एउटा पारदर्शी र जवाफदेहीयुक्त संस्था बनाउने र दुरुपयोग गरिएको पैसा बेलायतको कानून अनुसार संस्थाकै खातामा ल्याउन पहल गर्ने उनले बताए।
संस्थालाई सबै नेपालीहरुको साझा संस्था बनाउने र त्यसका लागि बेलायतमा रहेका सबै संस्थाहरुसँग सहकार्य गर्दै ’नेपाल हाउस निर्माण परियोजना’ लाई अगाडि बढाउने पनि उनको अजेण्डा छ।
आपत्कालिन कोषको रकम वृद्धि, नेपाली भाषा, साहित्य, कला र संस्कृतिको विकासका लागि अभियान चलाउने तथा बेलायतमा रहेका युवा तथा महिलाका लागि विविध कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै नेपालमा लगानी तथा पर्यटन प्रवर्द्धन गर्न विशेष कार्यक्रम ल्याउने उनले आफ्नो योजनामा समेटेका छन्। आफ्ना योजना कार्यान्वयन गर्नका लागि आफूले पूर्ण रुपमा समय दिने पनि उनले बताउँदै आएका छन्।
सातै दिन चौबिसै घण्टा
बेलायतमा ‘भ्वाइस अफ नेपाल कन्सर्ट’ गर्दा उनले भनेका थिए, ‘फाइदा भए संघलाई, घाटा भए मलाई’। उनको योजना अनुसार कार्यक्रम त सफल भयो। तर, झण्डै पाँच हजार पाउण्ड घाटा लाग्यो । त्यो घाटा मैले व्यक्तिगत रुपमा ब्यहोरेँ, उनले भने, नेपाली कला संस्कृतिको विस्तारका लागि कार्यक्रम गरिएको थियो, त्यसैमा म खुशी छु।
पहिलो पटक एनसीसी यूकेको उपाध्यक्षमा उम्मेदवार बन्दा उनले भनेका थिए– हप्तामा चार दिन संस्थालाई दिने छु। सोही अनुसार समय पनि दिइरहेका छन्। अध्यक्ष भएपछि त झनै समय दिनुपर्छ नि! उनी त्यसका लागि पनि तयार छन्।
बुवाकै प्रेरणाबाट लन्डन बक्सिङ च्याम्पियन भएका जेठो छोरा, स्याड्रक, विश्वविद्यालयको पढाइ पुरा गरेर रोयल मिलिटरी एकाडेमी स्याण्डहर्स्ट, मा अफिसर क्याडेटमा जाँदैछन्।
बुहारीले कानूनमा स्नातक गर्दैछन्। कान्छो छोरा, सुनिल, कलेजमा पढ्दै छन्। उनका दुइ जना बहिनीहरू पनि बेलायतमै बसोबास गर्छन्। आफ्ना सन्तान हुर्काइसकेका प्रेम यतिबेला व्यावसायिक र पारिवारिक रुपमा फुर्सदिला छन्।
उनलाई परिवारको पूर्ण साथ र सहयोग पनि उपलब्ध छ। ‘अध्यक्ष भएँ भने मैले सातै दिन, चौबीसै घण्टा संस्थालाई दिने छु,’ उनले भने। आगामी दुई वर्ष अध्यक्षका रुपमा संस्थालाई नेतृत्व दिने मात्रै नभई समस्याको सही समाधानमा अग्रसर हुने प्रतिबद्धता पनि प्रेमले व्यक्त गरेका छन्। उनलाई हाम्रो शुभकामना।
प्रकाशित : २८ बैशाख २०७८, मंगलबार